कोरोनाको डरले आत्तिएको मनलाई कसरी सन्तुलन बनाई राख्ने ? अपनाउनुहोस यी उपाय
बुधबार, असार ९, २०७८ ०३:२९:०६ युनिकोड
धादिङ,२९ बैशाख ।
विपत्तिको समयमा मानिसको मन बढी नै चल्ने गर्छ । मन जति चलायो त्यति नै शरीरलाई गाह्रो हुन्छ । यस बेलामा शरीरका ज्ञानेन्द्रीय बढी नै सतर्क हुने गर्छन् । कति बेला के सुन्न पर्ने हो, के देख्न पर्ने हो र के भोग्न पर्ने हो भन्ने जस्ता भावनाहरु मानिसको मनमा बारम्बार आइरहन्छ । समस्या आउन बाँकी नै हुन्छ ।
त्यसलाई आफूले झेल्न पर्छ या पर्दैन भन्ने पनि निश्चित हुँदैन । तर पनि त्यसकै कल्पनामा मानिसको मन आत्तिरहन्छ ।विपत्तिको समयमा मन आत्तिनु, डर हुनु र चिन्ता लाग्नु स्वाभाविक हो । यसलाई असामान्य परिस्थितिको सामान्य प्रतिक्रियाहरू हुन् भनेर बुझ्नु पर्छ । तनाव भन्नाले कुनै अप्ठ्यारो अवस्थामा मानिसको मनमा आउने अस्थिरता र शरीरले देखाउने प्रतिक्रिया हो । तनाव भनेको हाम्रो वातावरणमा घटेको कुनै पनि घटनाहरू प्रतिको मानिसहरुको प्रतिक्रिया हो । जसले तनाव अन्तर्गत शरीरको अप्ठ्यारो अवस्थालाई जनाउँछन् । परिस्थिति अनुसार मानिसको मनस्थिति परिवर्तन भइरहेको हुन्छ ।
परिस्थिति परिवर्तन गर्न सक्दैनौं जुन हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिरको कुरा हो । तर हाम्रो मनस्थिति भने परिवर्तन गर्न सक्छौँ । हामीले जे सक्छौं त्यही गर्ने हो । त्यसैले यस्तो बेलामा मनस्थितिलाई बलियो बनाउन प्रयास गर्नुपर्छ । मन सकारात्मक कुरामा भन्दा पनि नकारात्मक कुरामा बढी जान्छ । नकारात्मक कुराले हामीलाई थप पीडा दिन्छ र असहज बनाउँछ । जे सोच्छौँ त्यस्तै हुन्छौँ । सोचाई अनुसार शरीरले पनि प्रतिक्रिया जनाउँछ ।
विपत्तिमा देखिने असरहरू :
त्रासदीपूर्ण घटना सहने तरिका तथा क्षमता सबैमा एकनासको हुँदैन, घटी बढी नै हुन्छ । जसरी अरु कुराहरु पनि व्यक्ति व्यक्तिमा फरक हुन्छ ।
यस्तो समयमा मन र शरीरलाई कसरी शान्त राख्ने त ?
विपतको समयमा डर, चिन्ता, पिर तथा रिस हुन स्वाभाविक हो । असामान्य अवस्थामा हुने सामान्य प्रतिक्रिया हुन् भनेर बुझ्नुपर्छ । यस्ता समस्याहरू सबैलाई हुन्छन् । तर ती समस्या कम हुनुको साटो बढ्दै गयो भने यस्तो बेलामा विशेषज्ञको सहयोग लिनुपर्छ ।